ထုတ်ကုန်စက်ရုံ - လက်ကားထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်ဆိုပါ- 0086-13706517482
Drive Shaft အစိတ်အပိုင်းများ
Universal Joint ပါ။
အော်တို Universal Joint
PTO Shaft အစိတ်အပိုင်းများ
PTO Shaft စည်းဝေးပွဲ
သေးငယ်သော Universal Coupling
စက်မှု Drive Shafts
စက်မှု Drive Shafts Flange Yoke
TOYOTA အတွက် Steering Rack
TOYOTA အတွက် Drive Shaft CV Assembly
TOYOTA အတွက် Auto Bearing
စိတ်ကြိုက် CNC စက်ယန္တရားမောင်းများ...
ဂျပန်ကား Universal Joint
မော်တော်ကားအက်ပလီကေးရှင်းအတွက် မောင်းတံ- Porsche Cayenne၊ Volswagen Touareg ဓာတ်ဆီ၊ Audi Q7 OEM နံပါတ်- 955.421.020.11/12/13/14/15; 7L0 521 102B/D/G/H/M/N 7l6 521 102G/J/M/P
Drive Shaft Parts-End Yoke
Drive Shaft Parts-End Yoke၊ drive shaft စနစ်အတွက် အသုံးပြုသည်။ Spicer နံပါတ်- 04-852-1၊ U-joint အတွက် Fit: 5-438X၊ 134.52*47.6 ယာဉ်အတွက်အသုံးပြုသည်- Benz 1218/2318၊Ford Cargo/F14000/F-2200၊ VW13.210၊ Iveco Eurocargo
ကုန်တင်ကားအတွက် အနားကွပ် 8 ခုပါသော စက်မှုဒရိုက်ဗ် Shafts Flange Yoke အသစ်စက်စက်
ဒီဇိုင်းအသစ် လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းများအနားကွပ် 8 ခုပါသော ထရပ်ကားအတွက် Industrial Drive Shafts Flange Yoke၊ Flange Yoke ၏အလေးချိန်သည် အရည်အသွေးမြင့်ပြီး 1.22kg ဖြစ်သည်။ အော်တိုဂီယာစနစ်တွင် အသုံးပြုထားသည်။
တရုတ်စက်ရုံမှစိတ်ကြိုက် CNC စက်ယန္တရား driveshaft အနားကွပ်ထမ်းပိုး 1027DIN100
ယာဉ်အပိုပစ္စည်းများ PTO Flange Yoke CNC ကြိတ်ခွဲခြင်း သံမဏိအဒပ်တာ Flange Yoke မော်တော်ယာဉ်များအတွက်။ Driveshaft အနားကွပ်ထမ်းပိုးပစ္စည်း- အလူမီနီယမ်၊ ကြေးဝါ၊ စတီးလ်၊ ကြေးနီ၊ ပလပ်စတစ်၊ သစ်သား၊ ဆီလီကွန်၊ ရော်ဘာ၊ သို့မဟုတ် ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရ။
End Yoke 26-317 Drive Shaft အစိတ်အပိုင်းများ
Ref. မရှိ A B C D E G H NX FZ
၂၆-၃၁၇ 27 92 ၁၄၈.၇ ၅၇.၂ 84 φ34.5-31Z
ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် (ပြည်မ)၊ အလုပ်အပြည့်နှင့် ဆဲလ်သေ
အာမခံချက်- OE နံပါတ်-
1 နှစ် HZ26-317
ငါ့ကိုမေးပါ။ OEM စံအရွယ်အစား၊ OEM စံအရွယ်အစား
ထမ်းပိုး အဆုံး ISO9001/TS16949
အခြား OEM NO- ပစ္စည်း-
HZ26-317 45# သံမဏိ
ထုပ်ပိုးမှု- PTO/ အော်တို/စက်မှုလုပ်ငန်း/ ဆောက်လုပ်ရေး-
ကြားနေသေတ္တာထုပ်ပိုးခြင်း/စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း။ Auto Drive Shaft အစိတ်အပိုင်းများ
Flange Yoke 41-489 Truck Drive Shaft အစိတ်အပိုင်းများ
Ref. မရှိ A B C F G NH
၄၁-၄၈၉ 59 ၁၇၁.၇ 102 177
1 နှစ် HZ41-489
6.02 ကီလိုဂရမ် OEM စံအရွယ်အစား၊ OEM စံအရွယ်အစား
HZ41-489 45# သံမဏိ
1, ကွင်းဆက် လေးခုပါဝင်သည်- ဂီယာကွင်းဆက်; Conveyor ကွင်းဆက်; ပူလီကွင်းဆက်; အထူးအထူးပြုကွင်းဆက် 2. မကြာခဏ သတ္တုချိတ်များ သို့မဟုတ် ကွင်းဆက်များ- မကြာခဏ သတ္တုအချိတ်အဆက်များ သို့မဟုတ် ကွင်းဆက်များဖြစ်သော လမ်းတစ်ခု၊ မြစ် သို့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်းဝင်ပေါက်တွင်ကဲ့သို့ အသွားအလာလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ပိတ်ဆို့ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ကွင်းဆက်တစ်ခု။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂီယာအတွက်ကွင်းဆက်တစ်ခု; 3, ကွင်းဆက်ကိုတိုတောင်းသောအစေးတိကျစွာ roller ကွင်းဆက်အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်; တိုတောင်းသောအစေးတိကျမှု roller ကွင်းဆက်; လေးလံသောဂျူတီဂီယာအတွက်ကွေးပန်းကန် roller ကွင်းဆက်; ဘိလပ်မြေစက်များ...
TOYOTA VKBA7554 အတွက် Wheel Hub Bearing
Hub bearing (HUB bearing) သည် bearing ၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပြီး hub ၏လည်ပတ်မှုအတွက်တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်ပေးရန်၎င်းသည် axial load နှင့် radial load နှစ်ခုလုံးကိုထမ်းထားသောကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျ မော်တော်ကားဘီးပေါက်ခြင်းကို tapered roller bearings သို့မဟုတ် ball bearings နှစ်စုံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဝက်ဝံများကို တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဆီလိမ်းခြင်း၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းခြင်းတို့ကို မော်တော်ယာဥ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင် ဆောင်ရွက်သည်။
စတီယာရင်အင်ဂျင်သည် ပုံမှန်အခြေအနေတွင်၊ ပါဝါစတီယာရင်စနစ်ပါရှိသော ကားကို မောင်းနှင်ရန် လိုအပ်သော စွမ်းအင်၏ အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပြီး ယာဉ်မောင်းမှပေးသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ဖြစ်ပြီး အများစုမှာ ဆီပန့်မှပေးသော ဟိုက်ဒရောလစ် (သို့မဟုတ်) အနုမြူစွမ်းအင်များဖြစ်သည်။ air compressor) အင်ဂျင် (သို့မဟုတ်) မော်တာဖြင့် မောင်းနှင်သည်။
Coupling ဆိုသည်မှာ မောင်းနှင်တံနှင့် မောင်းတံကို ခိုင်မြဲစွာ ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အတူတကွ လှည့်ပတ်ကာ ရွေ့လျားမှုနှင့် torque ကို ပေးပို့ရန် မတူညီသော ယန္တရားများတွင် အသုံးပြုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရှပ်ကို အခြားအစိတ်အပိုင်းများ (ဥပမာ ဂီယာ၊ ပူလီစသည်ဖြင့်) ချိတ်ဆက်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ များသောအားဖြင့် သော့တစ်ခြမ်း သို့မဟုတ် တင်းကျပ်စွာ အံဝင်ခွင်ကျ စသည်တို့ဖြင့် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကာ ရိုးတံနှစ်ခုစွန်းတွင် ချိတ်ထားပြီးနောက် တစ်ခြမ်းနှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ရန် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ မတိကျသောထုတ်လုပ်မှုနှင့် တပ်ဆင်မှု၊ အလုပ်ချိန်အတွင်း ပုံပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူချဲ့ထွင်ခြင်းကြောင့် ရိုးတံနှစ်ခုကြားရှိ အချိတ်အဆက်သည် (axial offset၊ radial offset၊ angular offset သို့မဟုတ် comprehensive offset အပါအဝင်) နှစ်ခုလုံးကို လျော်ကြေးပေးနိုင်သည်။ တုန်ခါမှု စုပ်ယူမှု ၊ တုန်ခါမှု လျော့ပါး စေခြင်း တို့ ပါ ။
အရည်အသွေးကောင်း PTO Shaft Yoke
စိုက်ပျိုးရေးစက်ထွန်စက် Ball PTO Splined Yoke ခြွေလှေ့စက် အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ခြွေလှေ့ချိန်ကွာဟမှုနှင့် ဗုံအမြန်နှုန်းကို စစ်ဆေးရန်နှင့် ချိန်ညှိရန်ဖြစ်ပြီး စပါးများကို ကြိတ်ချေမှုနှုန်း အလွန်မြင့်မားပုံမပေါ်သည့်အတွက် ဖယ်ရှားမှုနှုန်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ခြွေလှေ့ချိန်ညှိသောအခါ…
အရည်အသွေးကောင်း PTO Shaft Assembly
Seeder Drive Shaft ကို အစေ့အဆန်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ စားကျက်များ စသည်တို့ကဲ့သို့သော အစေ့ငယ်များ ကြဲရန် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ အသုံးများသော စပါးအလေ့အထများဖြစ်သည်။ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း လမ်းလျှောက်ဘီးသည် မျိုးစေ့ဘီးကို လှည့်ရန် မောင်းနှင်ပေးကာ မျိုးစေ့သေတ္တာမှ အစေ့များကို မျိုးစေ့ပိုက်ထဲသို့ ချပေးသည်...
စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဇုန်၊ Xiaoshan ခရိုင်၊ Hangzhou မြို့၊ Zhejiang ပြည်နယ်